Maki Hojo - farmer girl (mmsub)
(21+) Maki Hojo - farmer girl မွနျမာစာတနျးထိုး
ဒီတခါတော့ DSဖနျတှကေို အလှပဂေး hojo-samaနဲ့‌မိတျဆကျပေးပါ့မယျ...အရမျးနာမညျကွီးတဲ့ မျောဒယျလျတဈယောကျဖွဈတဲ့ သူမဟာ ရိုကျကှငျးအတှကျ ရှာတရှာကို သှားခဲ့ပါတယျ.ရှာထဲက စိုကျခငျးတဈခုမှာ ဓာတျပုံရိုကျရငျး ယိုးသားတဲ့ ရှာသူ ရှာသားတှနေဲ့ ခငျမငျသှားခဲ့ပါတယျ.
ဒီ‌လိုနဲ့ပဲ သူမရဲ့ ဌာနကေို ပွနျရမယျ့ အခြိနျကို ရောကျလာတဲ့အခါမှာတော့ယိုးသားတဲ့ ရှာသားတှရေော သူမပါ စိတျမကောငျးဖွဈရပါတယျ...ရှာကပွနျရမယျ့နမှေ့ာတော့ သူမဟာ သူမခငျမငျတဲ့..ယိုးသားကွိုးစားတဲ့ ရှာသားတှကေို ဘယျလို ကြေးဇူးတုနျ့ပွနျ နှဈသိမျ့ပေးမယျဆိုတာကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ကွညျကွညျလငျလငျတငျဆကျပေးထားတာ‌ကွောငျ့
DSဖနျ‌တှေ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ ဇာတျကားလေးပဲ ဖွဈပါတယျ...၂၁+ ဖွဈတာကွောငျ့ ၂၁အောကျမကွညျ့သငျ့ပါ.
(21+) Maki Hojo - farmer girl မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီတခါတော့ DSဖန်တွေကို အလှပဂေး hojo-samaနဲ့‌မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်...အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူမဟာ ရိုက်ကွင်းအတွက် ရွာတရွာကို သွားခဲ့ပါတယ်.ရွာထဲက စိုက်ခင်းတစ်ခုမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း ယိုးသားတဲ့ ရွာသူ ရွာသားတွေနဲ့ ခင်မင်သွားခဲ့ပါတယ်.
ဒီ‌လိုနဲ့ပဲ သူမရဲ့ ဌာနေကို ပြန်ရမယ့် အချိန်ကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ယိုးသားတဲ့ ရွာသားတွေရော သူမပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်...ရွာကပြန်ရမယ့်နေ့မှာတော့ သူမဟာ သူမခင်မင်တဲ့..ယိုးသားကြိုးစားတဲ့ ရွာသားတွေကို ဘယ်လို ကျေးဇူးတုန့်ပြန် နှစ်သိမ့်ပေးမယ်ဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကြည်ကြည်လင်လင်တင်ဆက်ပေးထားတာ‌ကြောင့်
DSဖန်‌တွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်...၂၁+ ဖြစ်တာကြောင့် ၂၁အောက်မကြည့်သင့်ပါ.
Credit -Dark Side
Link - https://mkvlinks.xyz/95plwenC